Trump oo amray in isbuucyo gudahood ciidamada Mareykanka looga saaro Soomaaliya [Warbixin]. – Shabakadda Amiirnuur
December 5, 2020 1:36 pm by admin Views: 145
Amar rasmi ah oo kasoo baxay madaxweynaha waqtigiisu sii dhammaanayo ee dalka Mareykanka ayaa lagu faray dhammaan ciidamada American-ka ah ee ku sugan Soomaaliya in ay isku diyaariyaan soo bixitaan.
Wasaaradda difaaca ee loo yaqaan Pentagon ayaa gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha sheegtay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya oo gaaraya 700 oo askari ay dalka isagasoo bixi doonaan waxaana lageyn doonaa saldhigo kuyaal wadamada Jabuuti iyo Kenya.
Ciidamadan oo sanadadii lasoo dhaafay Soomaaliya ka waday howlgallo ay ugu magac dareen Argagaxiso ladirir balse ahaa xasuuq shacab ayaa lagu amray in ay isaga huleelaan ciidda Soomaaliya 15-ka bisha soo socota ee Janaayo 2021 maalo yar ka hor inta uusan xilka madaxtinimo lawareegin Joe Biden.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay qeyb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu dhimayo dhammaan ciidamada American-ka ee duullaanka ku qaaday caalamka Islaamka sida wadamada Ciraaq iyo Afghanistan.
Mareykanku wuxuu sheegayaa in uu doonayo soo gaba gabeynta dagaalka waqti dheer qaatay ee ciidamadiisu ay uga jiraan caalamka Islaamka tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dhaceen weeraradii 11 september isagoo ku andacoonaya in dagaalladaas ay ku riixday Al Qaacidda.
Amarka Trump kuma cadda mustaqbalka safaaradda Mareykanka iyo saraakiisha American-ka ah ee ku sugan xerada Xalane ee magaalada Muqdisho in iyana dhanka Kenya loo rari doono iyo inkale.
Boqolaal Askari American ah ayaa ku sugan saldhigga Balidoogle ee Sh/hoose iyo garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo halkaas oo ay kasoo kacaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan kuwaas oo xasuuq ka geysta wilaayaatka Jubbooyinka iyo Sh/hoose.
Warbixinta kasoo baxday wasaaradda G/dhigga waxaa lagu sheegay in ay joogsan doonaan dhammaan tababaradii uu Mareykanku siin jiray maleeshiyaadka dowladda Farmaajo iyo kuwa maamul goboleedyada.
Marmarka qaar ciidamada Mareykanka ayaa weerarada habeen dheelmadka ah kala qeyb qaatay maleeshiyaad dabadhilifyo ah oo ay iyagu tababarteen.
Bishii lasoo dhaafay weerar ay Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen ciidamo American ah oo ku sugnaa deegaanka Gandershe waxaa ku dhintay sarkaal sare oo katirsan sirdoonka Mareykanka ee CIA-da loo yaqaan.
Sanaddii 2017 markii uu Trum xilka lawareegay ayuu soo saaray wareegto uu ciidamadiisa ku amrayo in Soomaaliya ay geliyaan xaalad adagaal isagoo ufasaxay geysashada duqeymo iyo weeraro toos ah oo aan lagu kala soocayn Mujaahidiinta iyo Shacabka rayidka ah.
Afartii sano ee Trump uu xilka hayay ayay ciidamda Mareykanku Soomaaliya ka geysteen xasuuqii ugu xumaa tan iyo sanaddii 1993-dii xilligaas oo uu dhacay dagaalkii ku caan baxay magaca “Black Hawk Down” kolkaas oo Muqdisho lagu dilay tobanaan askari American ah.
duqeymaha uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya inta la diiwaan geliyay sanadadii uu Trump xilka hayay ayaa ah sidan
sanaddii 2017 waxay diyaaradaha Mareykanka ay Soomaaliya ka geysteen 35 duqeyn
sanaddii 2018: waxay diyaaradaha Mareykanka geysteen 47 duqeyn
sanaddii 2019: waxay diyaaradaha Mareykanka Soomaaliya ka geysteen 63 duqeyn
sanaddii 2020: waxay diyaaradaha Mareykanka Soomaaliya ka geysteen 48 duqeyn
XIGASHO SOMALI MEMO